यसरी थाहा पाउनुस पाकेटमार, ७७ पाकेटमार यसरी परे पक्राउ | mulkhabar.com
December 19, 2018 | 8:51 pm 123 Hits
राजधानीमा गाडि चढ्दा पाकेटमारदेखि होसियार लेखेको हुन्छ । अर्थात तपाईंको पाकेट मारिन सक्छ वा तपाई लुटिन सक्नुहुन्छ भन्ने संकेत दिइएको हुन्छ । जब गाडिमा चढ्ने वित्तिकै त्यस्तो संकेत देखिन्छ भने यात्रा तनावग्स्त त हुने नै भयो । तर कसरी थाहा पाउने आफू लटिँदैछु भन्ने कुरा ? कसरी चिन्ने पाकेटमारलाई ? यो प्रश्नले हामी सबैलाई हानीहरेको हुन्छ ।
कतिपय पाठक त शिकार पनि भइसक्नुभएको होला तर पनि पाकेटमारसँग भने साक्षत्कार हुन पाएको छैन होला । कस्तो होला पाकेटमारको अनुहार, कस्तो होला पाकेटमारको पहिरन, कस्तो होला पाकेटमारको शैली, के गर्छन होला पाकेटमारले ? यो कुरा भने गजबकै छ । नेपाल प्रहरीले स्टिंग अप्रेशन चलाएर यी कतिपय प्रश्नको हालसम्मको उत्तर पत्ता लगाएको छ ।
प्रहरीले बुधबार सार्वजनीक यातायातमा पाकेटमार गर्ने ७७ जनालाई सार्वजनीक गरेसँगै यी प्रश्नहरुको अहिलेसम्को उत्तर भेटिएको हो ।
महाराजगंगजमा आफ्नो खल्तीबाट एटीमसँगै पैसा लुटिएको उजुरी दिएपछि आफ्नो प्रसा पाउने आश नै मारेका कैलालीका सुरेन्द्रबहादूर सिंहको आँशुले महाराजगञ्ज विटका प्रमूख ..फुयाँल गम्भीर भएसँगै यो अभियानले सफलता पाएको हो ।
काठमाडौंको सवारी साधनहरू सर्च गर्ने क्रममा ७७ जना पाकेटमारा पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीहरूले विभिन्न सवारी साधनमा सर्च गर्ने क्रममा ७७ जना पाकेटमारालाई पक्राउ गरेको परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्तकुमार लामाले जानकारी दिए।
उनीहरूलाई चोरी अन्तरगत कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनीहरूको साथबाट बरामद गरिएको ५ लाख ९६ हजार नगद सम्बन्धित पीडितहरूलाई बुझाइएको पनि परिसर प्रमुख लामाले बताए। पाकेटमाराहरूको साथबाट ३९ थान मोबाइल, ४ थान आइप्याड, ५ थान ल्यापटप पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौंको सवारी साधनहरू सर्च गर्ने क्रममा ७७ जना पाकेटमारा पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो।
यसरी पक्राउ परे ७७ जना पाकेटमार ।
कैलालीका सुरेन्द्रबहादुर सिंह नातिको उपचारका लागि पैसा बोकेर २५ मंसिरमा काठमाडौं आए । नयाँ बसपार्कमा ओर्लिएपछि अन्तरराष्ट्रिय बालमैत्री अस्पतालसम्म जान कान्तिपुर यातायातमा चढे ।
‘गाडी एकदम भिड थियो’, उनले स्मरण गरे, ‘हतार थियो, जसोतसो बसमा चढेँ ।’गाडीभित्र एक छेऊमा गएर उनी उभिए । केहीबेरमै ७र८ जना युवकहरुको समूहले उनलाई घेरे । एउटा सिट खाली गरिदिँदै त्यहाँ बस्न भने । ‘होला त नि भनेँ १ सिटमा बसेँ’, सिंह सम्झन्छन्, ‘एउटा केटाले झोला पनि समातिदियो ।’
त्यसरी दया देखाउने युवकहरुले नै नातिको उपचारका लागि ल्याएको पैसा लुट्लान् भनेर उनले सोचेका पनि थिएनन् । तर, भइदियो त्यस्तै । जब नारायण गोपाल चोकमा उनी पुगे तब थाहा भयो, उनको गोजीमा भएको पैसा गायब भइसकेको थियो । ती युवकहरु गाडीमा थिएनन् ।
एटीएम नै पकेटमारको काल बन्यो
काठमाडौं प्रहरी परिसरले चलाएको पाकेटमार विशेष अपरेशनका क्रममा सुरेन्द्रबहादुरलाई लुट्ने पाकेटमारहरु समातिएका छन् । उनीहरुले पैसा निकालेको एटीएमकै फुटेजमार्फत प्रहरीले घटनामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी रकम फिर्ता गराउन सफल भयो ।
परिसरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० वसन्त लामा भन्छन्, ‘उक्त घटनामा संलग्नसहित १५ मंसिरदेखि यता भएका लुटपाटमा संलगन ७७ जनालाई पक्राउ गरेका छौं ।’
लामाका अनुसार प्रहरीले सार्वजनिक यातायातमा हुने लुटपाट र पकेटमारीका घटनालाई नियन्त्रण गर्न ५० जना सादा पोशाकका प्रहरी नै खटाएको थियो । त्यसक्रममा नगद, मोबाइल, गरगहना लगायत चोरी गर्दा गर्दै उनीहरुलाई रंगे हात पक्राउ गरिएको हो ।पक्राउ पर्नेमा महिलाहरू समेत थिए ।
यसरी चिनौं पकेटमार : भाषा, शैली र बोली पुरै फरक
पाकेटमारीमा संलग्नहरुले विभिन्न सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्ने गरेको खुलेको छ ।
उनीहरुले पैसालाई ‘द’, मोबाइललाई ‘कान’, पीडितलाई ‘रामे’, पकेटमारी गर्नेलाई ‘मास्टर अथवा कासी’, पैसा धेरै भएको अवस्थालाई ‘टानको द’, पैसा थोरै हुँदा ‘जुटेको द’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, गाडीलाई ‘काँचा’, केटालाई ‘छापा’, केटीलाई ‘भद्री’, प्रहरी आयोलाई ‘ठूल्दाइ आयो’, ड्राइभरलाई ‘माम’, खलासीलाई ‘मले’, गाडीबाट झरेर भागभन्दा ‘टप्की’, गाडीभित्र अगाडि सरभन्दा ‘अकल जा’ र गाडीभित्र पछाडि सर्न लगाउँदा ‘चिछल जा’ गर्दछन् ।
परिसर प्रमुख लामा भन्छन्, ‘सर्वाजनिक बसहरुमा २र२ जनाको दरले ६ जनासम्मको समूह बनाएर बसभित्र छिर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पैसा भएको यात्रु पत्ता लगाएर अगाडि पछाडिबाट घेराबन्दी गरेर ठेलम ठेलको अवस्था बनाउने गरिन्छ ।’
त्यही मौकामा यात्रुको नगद र सरसामान चोरी हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनीहरुले पकेटमारी गर्दा एक अर्कामा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।